​उपचारमा गल्ती गरे चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने
काठमाडौं । उपचारमा गल्ती गरे अबदेखि बिरामी पक्षलाई चिकित्सक आफैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन सरकारले ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रावधानसहितको छुट्टै कानुन ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले उपचारका क्रममा यदि बिरामीलाई प्रतिअसर, अंगभंग वा मृत्यु भए पीडित पक्षलाई सम्बन्धित....
​‘यौन सम्बन्धि विषय पढाउँदा लजाउँछन् शिक्षक’
रामधुनी । पाठ्यक्रममा समयानुकुल यौन तथा प्रजनन शिक्षालाई समावेश गरी परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । यौन शिक्षा सबैका लागि आवश्यक भएकाले पनि यो विषय पछिल्लो समय बहसको विषय बन्दै गएको छ ।
कक्षा कोठामा शिक्षकहरुले यौन तथा प्रजनन शिक्षाको....
​नवशिशुमा देखिने खतराका लक्षण र स्याहार
नवशिशुमा देखिने खतराका लक्षण
१. कम्पन आउने,
२. सास फेर्न गाह्रो हुने÷छिटोछिटो सास फेर्नु,
३. धेरै कम तौलको बच्चा....
​कसरी गर्ने रिस नियन्त्रण ?
रिस सबैलाइ उठ्छ तर त्यो कति बेर रहन्छ वा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । कसैलाई धेरै रिस उठ्छ भने कसैलाई थोरै उठ्छ । रिसले शारिरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा स्वास्थ्यमा समेत नराम्रोसँग प्रभाव पार्छ । बारम्बार रिसाउँदा नजिकको वा माया गर्ने मान्छेसँगको....
​यसकारण कम उमेरमै भइन्छ बहिरो
कान शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो । कानको सहायताले हामी सुन्ने गर्छौ । उमेर बढ्दै जाँदा सुन्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै जान्छ । तर, आजभोलि कम उमेरका मानिसलाई पनि कान नसुन्ने समस्या देखा परेको छ ।
आजकलको जीवनशैलीका कारण मानिसहरूले गर्ने केही गल्तीले बहिरोपनको समस्या....
प्याजको बोक्राको यस्तो छ औषधिय गुण
प्याजको बोक्रा फालेर प्याजको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर, प्याजको बोक्रा फाल्नु हुँदैन । यसमा धेरै औषधिय गुण पाइन्छ । त्यसैले प्याजको बोक्रा फाल्नु भनेको धेरै कुरा फाल्नु हो । कुनै कुनै तरकारीका बोक्रा कामै नलाग्ने हुन्छन् । तर प्याज यस्तो तरकारी हो जसको बोक्राको....
​शरीरका फोकाफोकीबाट यसरी पाउनुस् मुक्ति
शरीरको कुनै भागमा फोका वा पानीफोका आउँदा धेरै पीडा हुन्छ । अनुहारमा फोका आउँदा त झन सुन्दरता नै हराउँछ । शरीरको रगत खराब भएमा फोकाफोकी आउने गर्छ । यहाँ हामी केही यस्ता घरेलु उपाय बताउँदैछौं जसलाई अपनाएर तपाईं फोकाफोकीबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ ।
​यसरी बनाउनुहोस् तेजिलो आँखा
आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसबाट हामीलाई दृष्टि प्राप्त हुन्छ । त्यसैले आँखाको राम्रो हेरचाह गर्नु जरूरी छ । ज्यादा काम गर्दा आँखा कमजोर हुन्छ । दिनभरि कम्प्युटरमा जोतिनुपर्ने आजभोलिको जागिरले आँखालाई तनाव हुने गरेको छ । यहाँ बताइएको घरेलु उपचारले तपाईंका आँखाको तेज....
​सोयाबिन खानुका फाइदाहरु
सोयाबिन प्रोटिन र अन्य कैयौं पोषक तत्वले भरपुर हुन्छ । सोयाबिन खान धेरै मानिसहरु रुचाउँछन् । तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ सोयाबिन खानाले स्वास्थ र सोन्दर्यसँग सम्बन्धित यस्ता विभिन्न फाइदाहरु पनि हुन सक्छ । जस्तैः
१. सोयाबिनमा प्रोटिन, क्याल्सियम, फाइबर, भिटामिन ई, भिटामिन बी कम्प्लेक्स,....